Ummangaliso wokugqibela wonyaka: ubudlelwane be-US-China | Ezezimali
Xa yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba siza kungena kwirally yesiqhelo yeeholide zeKrisimesi, sidibene nesiqwenga seendaba esithi ukusukela ngoku inokuba yinto enkulu yokurhweba kwiimarike zezabelo. Ayikho enye into ngaphandle kokuwohloka okunzulu phakathi kobudlelwane phakathi kwamazwe amabini anoqoqosho olunamandla emhlabeni: iChina ne-States. Ukuya kwinqanaba lokuzama ukuphazamisa iiseshoni zokugqibela zokuthengisa kwiimarike zesitokhwe. Nokuba uphantsi komgangatho ophezulu ngokuxhomekeke kwi ukuvela kweemarike zezemali ngeli xesha lokugqibela lonyaka eliza kuphela.
Kwelinye icala, le meko inyanzeliswa yinto yokuba uqoqosho oluhlumayo lwaseAsia luphakamise uxinzelelo ngokunxulumene nokubanjwa eCanada kwe-CFO yenkampani yeetekhnoloji efanelekileyo yeHuawei, Meng Wanzhou. Akumangalisi ke ukuba kuye kwathiwa kuyarhanelwa ukuba kwenziwe ubuqhetseba ukophula isohlwayo i-United States egcina i-Iran Sele kwiveki ephelileyo iimarike zihanjisiwe ziziphumo zeli nyathelo kubudlelwane bezorhwebo phakathi kwala mazwe mabini.
Akumangalisi ukuba ezi ndaba zichaphazele imarike yemasheya ngendlela enomtsalane nangaphezulu kwezinye zezopolitiko nezentlalo. Ngengqiqo yokuba usomashishini uWeng uphinde wavela ngalo Mvulo phambi kwenkundla kwisixeko saseCanada ngenjongo yokumisela ukuba uyayinikwa okanye hayi. ibheyile. Kuba ngokusekwe kwesi sigqibo, ii-equities zingathatha imeko enye okanye enye kwesi siphelo sonyaka sinzima kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Apho uninzi lwabo sele belungisa izikhundla zabo kolu rhwebo lwemali.
1 Ubudlelwane phakathi kwe-USA ne China
2 Bazama ukuphelisa ukungavisisani
3 Ukhuseleko oluchaphazeleke kakhulu kwimarike yemasheya
4 Ungabalekela njani kwimarike yemasheya?
5 Iingcebiso zokwenza kwimarike yemasheya
Nangona kunjalo, umongameli wase-United States of America, ezama ukuthomalalisa abalamli kunye neearhente zezemali, uphawule kumajelo eendaba ukuba ubudlelwane bezorhwebo phakathi kwala mazwe mabini anamandla kuqoqosho lwehlabathi. Kodwa inyani kukuba inyani kukuba iimarike zezabelo azikhange zihoye kangako kuyo ngenxa yendlela ebeziguqukele ngayo kwiiseshoni zokurhweba zamva nje. Ngale ndlela, isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, ibikhona malunga ne-3% kwiveki ephelileyo. Ngomngcipheko wokuwa unokukhuthazwa.
Ngomnye umthambo, inye into eqinisekileyo kwaye oko kukubanjwa kwalo mntu usomashishini kongeze umlilo emlilweni ekonakaleni kobudlelwane phakathi kweWashington neBeijing. Sele ikho, babonakaliswe kakhulu yi umdla wezoshishino Kwilizwe ngalinye kula kwaye anengxwabangxwaba kwiimarike zamashishini ezingenanzala emisiweyo kwezi ntsuku zokugqibela zika-2018. Nangona izinto zinokuya zisiba mbi ngenxa yobuntununtunu balo mba uninzi lweearhente zithetha ngalo
Bazama ukuphelisa ukungavisisani
Kwaye akufuneki silibale ukuba Urhulumente waseBeijing uzama ukunciphisa le nyani ukuba inokuba nefuthe elibanzi kwimarike yemasheya kunokuba abanye abatyali mali abancinci nabaphakathi banokucinga. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwanokujonga kwindawo esisiseko yokujonga amaxabiso athile, amacandelo okanye ii-indices zomhlaba wonke Apho iinkampani zetekhnoloji zezona zibuthathaka ekuphuhliseni ukwehla kwexabiso lamaxabiso azo. Njengoko kwenzekile kwiintsuku ezidlulileyo zokurhweba ngamasheya, ngakumbi kwimarike yemasheya yaseMelika.
Kwelinye icala, ii-equities zinamava okona kwehla kukhulu kwiminyaka emibini. Ngokukodwa, okoko iziganeko ezikhokelele kwi- Brexit eGreat Britain. Ngokumiselwa okucacileyo kwentengiso kwintengo, kodwa kule meko baye batsalela ingqalelo kwimpembelelo yabo ebonakalayo. Into ephazamise iindlela ezininzi uninzi lwabatyali zimali abathengisa ngalo mzuzu. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba kunyanzelekile ukuba kule mihla yabo iinkqubo zabo zenze imali ibe nengeniso kula maxesha achanekileyo.
Ukhuseleko oluchaphazeleke kakhulu kwimarike yemasheya
Akunakulityalwa ukuba ubudlelwane bezorhwebo phakathi kwala mazwe mabini makhulu bufanelekile Matshi olungileyo kwiimarike zamashishini ezingenanzala emisiweyo. Kuba, eneneni, onke amacandelo anomdla kakhulu kule nto kwiimarike zesitokhwe nangaphezulu kwezinye iindaba zezoqoqosho kunye nezentengiso. Kuwo onke, elinye lawona macandelo achaphazeleka kakhulu kobu budlelwane bezorhwebo ngokungathandabuzekiyo yitekhnoloji. Ixabiso labo lelona liye lahlwaywa. Ngokuhla kwamaxabiso abo ukuya kuthi ga kwi-5% okanye nangakumbi ngamandla.
Icandelo lebhanki lelinye lokuchaphazeleka okukhulu yile meko intsha iboniswe yi China naseMelika kuba uninzi lwamaqela ezemali lutyhola le ntshukumo kwiimarike zezemali. Ngokukodwa, kwilizwe lethu amaxabiso obungakanani be- I-Santander, i-BBVA okanye iSabadell Bakhokele ukuwa kukhetho lwengeniso yesizwe eguqukayo, ngamanani ehla ngaphezulu kwe-2%. Kwicandelo elalisele ligxile kwezinye iingxaki ezinokubaluleka okukhethekileyo, ezinje nge-Brexit.
Ungabalekela njani kwimarike yemasheya?
Ukujongana nale meko inzima ngokwenene, abatyali mali abaninzi bajonga amacandelo anokuthi enze njengendawo yokusabela kule meko ivele ngalo mzuzu kanye. Ewe, likho icandelo elisebenza ngcono kunamanye kwaye le ayisiyiyo enye ngaphandle kwale zombane. Ukuza kuthi ga ngoku le mihla iye yenza inkqubela phambili ebalulekileyo ezalise iindawo zayo ngokuthenga ngasekupheleni konyaka. Akumangalisi ke ngoko, ukuba abahlalutyi bezemali bancomela ukungena kolu khuseleko ukwenza ukuba inkunzi izuze imali kwiintsuku zokugqibela zalo nyaka eziza kuphela.
Ukhuseleko olufana ne-Enagás, Iberdrola okanye i-Endesa ziphakathi kwabambalwa abazisindisayo kwindlela yokuthengisa ngendaleko ekufuneka ichazwe njengefanelekileyo. Ngokuphononongwa ngokuthobekileyo kwemihla ngemihla, kwithoni ukuya kwisiqingatha sepesenti, kodwa ubuncinci baphulukana nemali ekuhambeni kokuthenga nokuthengisa izabelo. Oko kukuthi, ekupheleni kosuku, loluphi utyalomali kwizabelo. Ukongeza, kule mihla isasaza phakathi kwabanini zabelo nge Izabelo eziphezulu. Ngenzuzo emiselweyo kwaye eqinisekisiweyo ehamba kuluhlu olusuka kwi-5% luye kwi-7%.
Kuyo nayiphi na imeko, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokungenisa uthotho lweengcebiso ukuze ungabandakanyeki kwenye ingxaki ekupheleni konyaka. Ngeyona njongo iphambili yokuqinisekisa iiasethi ezizezakho ngaphezulu kwezinye izinto zobuchwephesha kwaye kude kube kwinqanaba lokujonga. Iya kusekelwa kule migca ilandelayo yesenzo sikubhengeza apha ngezantsi:
Asiloxesha elifanelekileyo lokuthenga engxoweni kwaye kuncinci kakhulu ukuba ndlongondlongo. Kungangcono ukuba ulinde kwaye ubone ukuba ubudlelwane bezorhwebo phakathi kweekolossi ezimbini zoqoqosho lwamanye amazwe buya kuphuma njani.
Kufuneka yeka ukuthatha izikhundla kumacandelo emarike yemasheya asemngciphekweni okwangoku kuba ukwehla kwawo kunokuba nzima kakhulu. Uya kuba nexesha lokuthenga izabelo zabo ngexabiso elinokhuphiswano ngakumbi ukusukela ngoku.
La ukuguquguquka Iya kuba sisinanisekisi esiqhelekileyo kwezi ntsuku, ke kuya kufuneka ungazithembi iimbuyekezo eziveliswayo kwiimarike zezabelo. Inokuba sisithiyelo ukuba ungene kwaye ubambeke kwizikhundla zabo.
Kuya kufuneka ungalibali ukuba ibhegi ingenile yehla ukusuka apho kuyakumxabisa kakhulu ukuphuma. Inokuhlala iinyanga, kodwa mhlawumbi iminyaka emva kokunyuka okuninzi okuqhubekayo unyaka nonyaka ukusukela ngo-2013.
Kuya kuhlala kukho ubunyani mathuba o shishino kwaye eyona ndlela yokufumana ithuba lokuzisebenzisa kukuba ube lulwelo ngokupheleleyo ukwenza iminikelo yemali oza kuyenza ukusukela ngoku ukuya phambili.
Sijongene nexesha elinzima kakhulu kwiimarike zamasheya zamanye amazwe ezifuna abatyali mali abancinci nabaphakathi igazi elininzi elibandayo kwaye ngaphezu kwako konke ukulumkisa. Musa ukuya phambili kwimisebenzi kuba inokubiza imali engathandekiyo kwezi zihlandlo zichanekileyo.
Ukuba awucacanga gca, eyona ndlela iyiyo yile shiya izinto zinje. La asingomaxesha okuzama kwiimarike zezabelo. Kwaye kuncinci ukutyala imali yakho ngaphandle kokucinga ngayo kuba kunokudala iingxaki ezingeyomfuneko ngeli xesha lonyaka.
Kwaye okokugqibela, kuya kufuneka uhlalutye ukuba ubudlelwane bezorhwebo phakathi kwala mazwe mabini yingxaki enkulu ekufuneka uyicamngce kuba iya kulungisa imarike yemasheya, ubuncinci kwixesha elifutshane. Ngaphandle kolunye uthotho lokuqwalaselwa kwezobuchwephesha ezinokuvela ngeli xesha. Ungalibali nakweyiphi na indawo yezicwangciso zotyalo-mali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ummangaliso wokugqibela wonyaka: ubudlelwane phakathi kwe-US-China